Ihe atụ: Martin Vrijland
Achọrọ ịntanetị "ebipụrụ" mgbe agha mwakpo London metro na ịwụ na akpa
gbara akwụkwọ OZI OZI, Ihe atụ	by Martin Vrijland	na 15 September 2017	• 12 Comments
Otu onye na-eyi ọha egwu na London na-echekwa mmiri na-acha ọcha n'ime akpa Lidl, etinyela nnukwu aka n'ukwu ya. Nwanyị nọ na foto ahụ na-emerụ ahụ nke ukwuu, ya na ọgwụ 18 merụrụ ahụ na-ezigara ya n'ụlọ ọgwụ. Ọ ghaghị ịbụ nnukwu ihe mgbawa na nke ọma na ndị ọrụ ụgbọ ala ahụ nwere njikọ zuru ezu [...]
Barcelona Ramblas esi agbagharia a hoax: Julian Cadman, onye na-agba chaa chaa, onye adịgboroja imam na onye agha ahụ gbapụrụ
gbara akwụkwọ OZI OZI, Ihe atụ	by Martin Vrijland	na 21 August 2017	• 25 Comments
N'isiokwu m gara aga banyere Barcelona Ramblas ọgụ na ọgụ ndị agha dara na Cambrils na ikuku gas na Alcanar n'abalị gara aga, akọwapụtara m edemede nke edemede nke a na-ahụkarị na mwakpo. N'ime ya, ọ bụghị naanị na m kwuru banyere ọnụnọ ndị ọrụ ebube nke lanarị ọtụtụ mwakpo gara aga, [...]
Mgbidi agha nke London nke 3 June ọzọ hoax?
gbara akwụkwọ OZI OZI, Ihe atụ	by Martin Vrijland	na 5 June 2017	• 81 Comments
Onye na-eyi ọha egwu na Saturday 3 June bụ ihe dị ịrịba ama ma gosipụta ihe niile a na-agbaso. Etughị aha 3 June; nke ahụ bụ iche echiche izu ike, ya mere 3 x 6 bụ 666. Mba, ka anyị leba anya n'ihe ndị dị ịrịba ama nke ị na-apụghị ịchọta azịza. N'ezie [...]
Zeeman Zeat, Jinek, Brandtunt na ụlọ ọrụ mgbasa akụkọ nke Russia
gbara akwụkwọ OZI OZI, Ihe atụ	by Martin Vrijland	na 8 February 2017	• 60 Comments
Ụbọchị gara aga ụnyaahụ Aart Zeeman bụ onye ọbịa na Jinek ịkọwapụta nchọpụta ya dị oke mma na nchọta nke ụlọ ọrụ mgbasa akụkọ nke Russia 'na Saint Petersburg. Ụnyaahụ, e gosipụtara mgbasa ozi nke Brandpunt na NPO2. Ihe kachasị mma nke nnyocha Aart Zeeman bụ na ndị akaebe a gbara akaebe zuru ezu [...]
Nleta ha: 2.593.783